Digital uye Direct yakapfuura Chinyakare uye High Street panguva yedenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Digital uye Direct yakapfuura Chinyakare uye High Street panguva yedenda
Uku ndiko nzwisiso inonakidza yekuti inoshanda sei tekinoroji - mupfungwa yakakura - yaive panguva yekukwirira kwedenda.
Digital tekinoroji yakashanda indasitiri zvakanyanya kupfuura zvechinyakare sarudzo panguva yeCovid-19 denda, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London uye Travel Forward.
Vanosvika mazana manomwe evatongi vepamusoro kubva pasirese vakatora chikamu muWTM Indasitiri Report uye vakakumbirwa kuti vatarise kushanda kweakasiyana matekinoroji nematanho. Vanosvika hafu yemuenzaniso (700%) yakataura kuti nzira dzekushambadzira dzedhijitari senge injini yekutsvaga, yekutsvaga yakabhadharwa uye kushambadzira email kwainyanya kushanda panguva yedenda, neimwe 47% ichivatsanangura seinoshanda. 30% chete ndiyo yakavatsanangura isingashande.
Kusiyana neizvi, makumi maviri neshanu muzana chete evatongi vakati vafambisi vekufamba mumigwagwa vakanyanya kushanda mukutsigira bhizinesi ravo panguva yedambudziko, vaine zvishoma (25%) vachiti vainyatsoshanda. Vazhinji vashoma (31%) vakati vamiririri vemigwagwa mikuru vaisashanda.
Kazhinji kutaura, nzira dzakananga-kune-vatengi dzakaita zvakanyanya panguva yedenda. Mawebhusaiti emhando, maapplication uye nzvimbo dzekuonana akatsanangurwa seakanyanya kana kuti anoshanda zvakanyanya neinopfuura 70% yemuenzaniso, nenhamba yakavadzinga senge isingashande yaive munhamba imwe chete muzana.
Kusiyana neizvi, midhiya yechinyakare yakadai sedhinda, TV uye tsamba yakananga zvaive zvakanyanya kana zvakanyanya kushanda zvisingasviki makumi mashanu muzana, asi chikamu chepamusoro - 50% - chakaramba nzira idzi sedzisina kushanda.
Kumwe kunhu, ma execs akabvunzwa zvakananga nezve maviri pre-Covid era's tekinoroji maitiro. Gore rakashanda kweinopfuura hafu yemuenzaniso (52%), kunyangwe vatengesi vemakore nemamaneja eakaundi vachafarira kuziva kuti sei mumwechete mugumi akafunga kuti gore rakanga risingashande. Saizvozvo, APIs - software iyo inobvumira maviri masisitimu kuti adyidzane - aive anoshanda kweanopfuura hafu yemuenzaniso asi achiri kusashanda kune 8%.
Nekudaro, chikamu chevarombo zvakanyanya chaive mabhangi emubhedha uye aggregator, nevasingasviki hafu (48%) vachiti mabhizinesi aya aitsigira panguva yedenda, chiyero chemvumo yakaderera pane chero pane rondedzero. Zvakare, vashoma vakakosha - 13% - vakavadzinga sevasina basa.
Mukupesana, yakanakisa kuita tekinoroji yekushandisa kesi yaive yekutaurirana, nevashandi nevatengi. Vanopfuura 80% yemuenzaniso vakati maturusi aya aishanda mukati mekushandisa mukati, ne4% chete vachiti maturusi aya akadonha. Kushandisa tekinoroji kutaura nevatengi vekunze kwakashanda zvinobudirira kwevanoda kusvika vatatu-mu-vana (74%), vaine 6% chete vasina kugutsikana.
Simon Press, Exhibition Director, WTM London uye Travel Forward, vakati; "Iyi i nzwisiso inonakidza yekubudirira kwe tekinoroji - mupfungwa yakafara - yaive panguva yekukwira kwedenda. Zvinoratidza kuti tekinoroji ichiri kupatsanurwa nehumwe matekinoroji uye/kana chiteshi hachisati chakwana chinangwa uye kutadza pane zvinodiwa, nepo vamwe vachiita kunge vakabuda nemvumo yepasirese.
"WTM London uye hanzvadzi yayo inotarisa tekinoroji yeTravel Forward iripo kubatsira makambani ekufambisa kuona kuti ndeapi tekinoroji yavanoda uye kuti ndiani wekubatana naye kuvakazve kufamba."